ကံကောင်းရင် နေမာ၊ ဘတ်ပီတို့နဲ့ပါ အသင်းဖော်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ လင်ဂတ် - Shwe Soccer
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းနည်းပြပိုချက်တီနိုဟာ ဝက်စ်ဟမ်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဂျက်ဆီလင်ဂတ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဟာ ဒီရာသီမှာ ဝက်စ်ဟမ်းအတွက် ၉ ပွဲကစားပေးထားရာမှာ ၈ ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးထားပြီး ၃ ကြိ်မ်ဖန်တီးပေးကာ ခြေစွမ်းပြနေပြီး ဥရောပဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းအတွက် အဓိကကစားသမားအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။
WOLVERHAMPTON, ENGLAND – APRIL 05: Jesse Lingard of West Ham United celebrates after scoring their team’s first goal during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and West Ham United at Molineux on April 05, 2021 in Wolverhampton, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူဟာ ဝက်စ်ဟမ်းမှာ အငှားနဲ့လာရောက်ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီကုန်အထိသာ အငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်လို့ ယူနိုက်တက်ကို ပြန်သွားရမှာဖြစ်ကာ ဝက်စ်ဟမ်းကလည်း လင်ဂတ်ကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူချင်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားကို မရောင်းချဘူးလို့ဆိုထားပေမယ့် ပေါင်သန်း ၃၀ နဲ့အထက် ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ရောင်းချသွားဖွယ်ရာရှိနေပါတယ်။
WOLVERHAMPTON, ENGLAND – APRIL 05: Jesse Lingard of West Ham United breaks free from Leander Dendoncker of Wolverhampton Wanderers to score his side’s first goal during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and West Ham United at Molineux on April 05, 2021 in Wolverhampton, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ လက်စတာနဲ့ပွဲမှာ အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးနှစ်ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးခဲ့ပြီးနောက် လင်ဂတ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေထဲ ပီအက်စ်ဂျီလည်း ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ပီအက်စ်ဂျီဘက်က အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းပြီး ခေါ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလန်ကစားသမားအနေနဲ့ နေမာ၊ဘတ်ပီတို့လို အကျော်အမော်တွေနဲ့ တွဲဖက်ကစားရမှာဖြစ်သလို အသင်းဖော်ဟောင်းဟာရဲရားနဲ့လည်း ပြန်လည်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာမီလန်၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့ကလည်း လင်ဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ ESPN က ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာ လင်ဂတ်က အကောင်းဆုံးပုံစံကို ရရှိနေပြီး တစ်ပွဲကို တစ်ဂိုးနှုန်းပုံမှန်သွင်းယူနေကာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါ ရွေးချယ်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားကတော့ အင်္ဂလန်မှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်ချင်နေတယ်လို့ သိရပြီး ဝက်စ်ဟမ်းက သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားနေရကာ ဥရောပဝင်ခွင့်ရရှိမယ်ဆိုရင် အပြီးသတ် ဒါမှမဟုတ် အငှားနဲ့ထပ်ကစားဖွယ်ရာရှိနေပါတယ်။
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနည္းျပပိုခ်က္တီနိုဟာ ဝက္စ္ဟမ္းမွာေျခစြမ္းျပေနတဲ့ ယူနိုက္တက္ကစားသမားဂ်က္ဆီလင္ဂတ္ကို ေခၚယူဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ဟာ ဒီရာသီမွာ ဝက္စ္ဟမ္းအတြက္ ၉ ပြဲကစားေပးထားရာမွာ ၈ ဂိုးအထိ သြင္းယူေပးထားၿပီး ၃ ႀကိ္မ္ဖန္တီးေပးကာ ေျခစြမ္းျပေနၿပီး ဥေရာပဝင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဝက္စ္ဟမ္းအတြက္ အဓိကကစားသမားအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။
အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ကြင္းလယ္လူဟာ ဝက္စ္ဟမ္းမွာ အငွားနဲ႔လာေရာက္ကစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီကုန္အထိသာ အငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာျဖစ္လို႔ ယူနိုက္တက္ကို ျပန္သြားရမွာျဖစ္ကာ ဝက္စ္ဟမ္းကလည္း လင္ဂတ္ကို အၿပီးသတ္ေခၚယူခ်င္ေနပါတယ္။ ယူနိုက္တက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ကစားသမားကို မေရာင္းခ်ဘူးလို႔ဆိုထားေပမယ့္ ေပါင္သန္း ၃၀ နဲ႔အထက္ ရရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရာင္းခ်သြားဖြယ္ရာရွိေနပါတယ္။
မေန႔က ကစားခဲ့တဲ့ လက္စတာနဲ႔ပြဲမွာ အသင္းအတြက္ အနိုင္ဂိုးႏွစ္ဂိုးအထိ သြင္းယူေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လင္ဂတ္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့အသင္းေတြထဲ ပီအက္စ္ဂ်ီလည္း ပါဝင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ပီအက္စ္ဂ်ီဘက္က အမွန္တကယ္ကမ္းလွမ္းၿပီး ေခၚယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဂၤလန္ကစားသမားအေနနဲ႔ ေနမာ၊ဘတ္ပီတို႔လို အေက်ာ္အေမာ္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ကစားရမွာျဖစ္သလို အသင္းေဖာ္ေဟာင္းဟာရဲရားနဲ႔လည္း ျပန္လည္ဆုံေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။
အင္တာမီလန္၊ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္တို႔ကလည္း လင္ဂတ္ကိုစိတ္ဝင္စားေနတယ္လို႔ ESPN က ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ လက္ရွိမွာ လင္ဂတ္က အေကာင္းဆုံးပုံစံကို ရရွိေနၿပီး တစ္ပြဲကို တစ္ဂိုးႏႈန္းပုံမွန္သြင္းယူေနကာ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္အသင္းမွာပါ ေရြးခ်ယ္ခံေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသမားကေတာ့ အဂၤလန္မွာပဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ခ်င္ေနတယ္လို႔ သိရၿပီး ဝက္စ္ဟမ္းက သူ႔အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားေနရကာ ဥေရာပဝင္ခြင့္ရရွိမယ္ဆိုရင္ အၿပီးသတ္ ဒါမွမဟုတ္ အငွားနဲ႔ထပ္ကစားဖြယ္ရာရွိေနပါတယ္။
Previous Article ဆွန်ဟောင်မင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွိုင်ကိန်းပွဲကြမ်းပြီ
Next Article ဂျီနိုအာနဲ့ပွဲအပြီး ဂျာစီလွှင့်ပစ်၊ နံရံကိုထိုးတဲ့အထိ ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို